WD. Fahad Yaasiin
BBC World Serviceka qaybteeda tababarka ayaa u qabatay Siminaar tababar Saxaafadeed ah, qaar kamid ah Wariya-yaasha Soomaalida ee ku sugnaa Nairobi. Tababarkaas wuxuu soconayey 7.ilaa 12.kii Bishan Oktobar, waxaana lagu qabtay Silver Springs Hotel. Wuxuuna ahaa Tababar ay bixinayeen Saxaafiyiin Soomaaliyeed. Waxay aad ugu sharxeen ardaydii kasoo qaybgashay Siminaarkaas, waxa laga rabo Saxafiga, sida uu diyaarinayo warbixinnada, sida waraysiyada loo qaado, iyo anshaxa laga rabo qofka Saxafiga ah. Waxaana xoogga la saarayey arimaha sida tooska ah u taabanaya shaqada qofka saxafiga ah.
Macalimiinta casharadaas bixinayey oo uu kamid ahaa C/Laahi Xaaji , ayaa si faahfaahsan uga waramay qaababka loo qaado waraysiyada iyo in wariyuhu uu xusuusnaado marka uu su'aalah u gudbinayo ninka siyaasiga ah, inuu yahay safiir matalaya dadweynaha, sidaas awgeedna looga baahanyahay inuu dadka si dhab ah u matalo, maxaa yeelay qof walba uma suuragleyso inuu arko Siyaasiga ama Madaxweynaha dalka.
Yuusuf Xasan ayaa isaguna si dhamaystiran uga bixiyey qaababka wararka loo qoro iyo sida warbixinada muhiimka ah loo diyaariya. Wuxuu kaloo tilmaamo cad ka bixiyey sida ay u kala duwan yihiin hadba waxa aad ka soo waramayso. wuxuuna yiri. Marka aad doorasho ka soo waramayso lama mid ahan marka aad goob dagaal ka soo waramayso.
Yuusuf Garaad ayaa isaguna ka hadlay qaababka loo qoro wararka, isagoo xooga saarayey sida afka Soomaaliga loo adeegsado marka aad dhacdo kasoo waramayso, wuxuuna tusaalayaal ka bixiyey sida loo hagaajiyo wararka qoristiisa. Wuxuuna aad uga sheekeeyey khibaradihii uu ka soo maray saxaafadda Soomaalida iyo guud ahaan intii uu ku dhexjiray warbaahinta, isagoo ka sheekeyey farqiga u dhaxeeya faallo qorista iyo warar qorista.
Cali Muuse ayaa kawramay sida ay u shaqeeyaan Wakaaladaha wararka ee dunida, wuxuuna si qeexan u fahamsiiyey ardaydii qaababka kala duwan ee ay u shaqeeyaan wakaaladaha caalamiga ah, iyo sida wararka looga soo qaato ama looga dhex baarto.
Waxaa iyaduna kamid ahayd macalimiintii siminaarka wax ka dhigayey ( Celeste) oo ah Gabadh ka tirsanayd qaybta tababarka Saxaafada ee BBC-da. Waxayna aad uga faallootay anshaxa laga rabo saxafiga, iyo asluubta looga baahanyahay inuu ku dhaqmo inta uu shaqada ku dhexjiro. Waxay Saxafiyiinta kula dardaarantay iney dhawraan dhaqanka wanaagsan si ay u noqdaan saxafiyiin laqadarinayo.
Siminaarkan wuxuu ahaa mid loo baahan yahay oo ay wax ka dhigayeen rag aad looga yaqaano saxaafadda Soomaalida guud ahaan, kuwaas oo ay kamid yihiin Yuusuf Garaad, C/Laahi Xaaji, Yuusuf Xasan, iyo Cali Muuse. Iyagoo ka sheekeeyey qisooyinkii cajiibka ahaa ee ka soo maray hawsha saxaafadda. C/Laahi Xaaji ayaa la jecleystay markii uu ka waramay waryasidii adkaa ee uu ka qaadi jiray Madaxweynihii hore ee Soomaalida M/S/Barre. Halka Yuusuf Garaadna uu ka sheekeeyey sidi uu saxaafadda ku soo galay. wuxuuna ardayda ku boorriyey iney muujiyaan hawl-karnimo iyo shaqo wanaag. Sidoo kale wuxuu kula dardaarmay iney aad wax u akhriyaan, iskuna dayaan iney yeeshaan aqoon muhim ah oo la xiriirta saxaafadda, si mar walba wax lagaaga weydiiyo arintaas.
Siminaarkan waxaa si toos ah u maamulayey Ustaad Yuusuf Xasan oo gacanta ku hayey dhamaan wadista iyo socodsiinta siminaarka, isagoo kamid ahaa macalimiinta wax ka dhigayey siminaarka, wuxuuna ardayda siiyey furasado dhaadheer oo ay ku weydiiyaan su'aalahooda iyo dareenka ay qabaan.
Ardaydii wax ka dhigatay siminaarkan oo ahaa Wariya-yasha ka hawlgala magaalada Nairobi oo si joogto ah uga soo warama wararka muhimka ah ee ka jira magaaladan, waxaana saxafiyiintaas ka muuqday iney siweyn ugu riyaaqeen ugana faa'iidaysteen siminaarkan, waxay wada lahayeen hal siminaar naguma filna oo waxaan u baahanahay siminaarro kale oo aqoon kororsi ah.
BBCda Laanta Af-Soomaaliga Oo Dhex Dhexaadnimadii Habeen Ka Guday!. [Faarax Jaamac]